coronavirus ၏ 2017 ခုနှစ်, ပရောဖက်ပြု Asterix?
အဆိုပါကာတွန်းစာအုပ် Asterix နှင့် coronavirus များအတွက်&#
Photo: အယ်လ်ဘမ် Asterix နှင့်ကြီးမားသောပြိုင်ပွဲ မှစ. ။
အဆိုပါကာတွန်းစာအုပ် Asterix အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲမှတစ်ခုမှာနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံအတွင်း 2017 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကြီးတွေပြိုင်ပွဲရုံ coronavirus ကိုခေါ်ပင် "ဒီဂရိတ် coronavirus," နှင့်သူ၏လက်ထောက် Bacillus တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒါဟာသိသာတဲ့နောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်, သို့သော် coronavirus Covid-19 ၏အခါသမယအပေါ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေးထားတိုက်ရိုက်ပျော်စရာယနေ့မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါကာတွန်းစာအုပ် Asterix နှင့်ကြီးမားသောပြိုင်ပွဲကနေ။
ငါတပြင်လုံးကို serielabumet ဖတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ကိုသာက်ဘ်ဆိုက်ကနေတချို့ရုပ်ပုံများနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွတော်မူပြီမဟုတ်။
သို့သော်လည်းငါသည်ရိုးရိုးသားသားကြောင့် 2020 ခုနှစ်ဟာကမ္ဘာ့ထိမှန်ခဲ့သည် coronavirus Covid-19 ၏အနာဂတ္တိသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းကြောင်းမစဉ်းစားကြဘူး။
Covid-19 coronavirus မိသားစုပိုင်, ဒါ coronavirus သင်တန်း, စီးရီးအယ်လ်ဘမ်ဖန်တီးသူကအကြောင်းဇော်လင်းကအခါ, 2017 တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။
Asterix အတွက်ဇာတ်ကောင်နှင့် "မဟာ coronavirus" ဟုခေါ်ကြီးတွေပြိုင်ပွဲနှင့်သင် coronavirus Covid-19 နိယာမတစ်ခုကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည့်, ကြီးမားသည်ဟုမထင်ပေလိမ့်မည်။
ထိုသို့ထံမှနှမြောနေပုံရသည်သာအာဖရိကနိုင်ငံတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် coronavirus ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ပါ! တစ်ဦးမမြင်ရတဲ့ဗိုင်းရပ် - - ယေရှုကဲ့သို့ကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာရှည်လွန်ခဲ့တဲ့သေးငယ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတယ်ပါ!
ယရှေုသညျကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံလိုက်တဲ့အခါသူကကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ, ငါတို့၏ရောဂါများ မှလွဲ. ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏! လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်, ယရှေုမာရ်နတ်အပေါင်းတို့နှင့်သူ၏နတ်ဆိုးများလုပ်ကြံ။
သငျသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိပြီလော သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောပါသလား? သငျသညျမဟုတျပါလျှင်၎င်းသည်ယခုသင်ရရန်အဘို့အမြင့်မားသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။